ZTE dia nanaiky ny fanitsakitsahana ny sazy amerikana manohitra an'i Iran ary handoa vola sahabo ho 1.000 miliara | Androidsis
Manaiky ny fandikana ny sazy amerikana atao amin'i Iran i ZTE ary handoa onitra maherin'ny 1.000 miliara
Na dia tsy ilaina aza ny mampahatsiahy anao ny olona iray, ny taona 2017 dia tsy nanomboka tsara ho an'ny mpanamboatra finday sinoa ZTE, nefa koa, toa tsy nitohy tamin'ny farany izany. Rehefa avy voatery manapaka asa efa ho telo arivo Tamin'ny volana janoary lasa teo, dia niaiky ny heloka vitany ny ZTE noho ny fanitsakitsahana sazy ara-barotra amerikana an'i Iran, ary tokony handoa onitra $ XNUMX miliara.
Tamin'ny taon-dasa, ZTE dia voampanga ho nanitsakitsaka ny sazy amerikana noho izy nanao raharaha niaraka tamin'i Iran, ary na eo aza ny maha-orinasa sinoa azy, na dia misy ifandraisany amin'ny teknolojia amerikanina aza izany. Aorian'io fiampangana io, Ny departemantan'ny varotra amerikana dia nandrahona ny hampiato ny famatsiana ho an'ny ZTE amin'ireo mpiara-miasa aminy rehetra any Etazonia. Na dia niato imbetsaka aza izany fandrahonana izany, dia nokasaina hanomboka tamin'ny volana lasa izy io, ary mety ho loza lehibe ho an'ny orinasan'i ZTE io izay vitany ny nisoroka ihany, na dia teo aza izany.
Tamin'ny farany, ZTE dia nanakana ny Sampan-draharaha Varotra tsy hanaraka ny fandrahonana ataony ary, ho takalon'ny fangatahana meloka sy sazy mihoatry ny $ 900 tapitrisa, ZTE dia afaka manohy miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny US supply chain toa an'i Qualcomm.
Ny marina izany ny vahaolana mbola tsy mandaitra ny natsangana, na dia eo aza ny fizotrany: ny fitsarana dia tsy maintsy mankato ny fifanarahana miaraka amin'ny Departemantan'ny Fitsarana ary, aorian'izany, ny Sampan-draharahan'ny varotra dia hanome soso-kevitra ny fanesorana ny ZTE amin'ny lisitry ny mpandika lalàna.
Ny filoha vaovao Donald Trump dia nanamafy ny kabariny hanohitra an'i Iran ary tsy isalasalana fa ny fandrahonana ho lasa orinasa voamarika ho mpiara-miasa amin'ny "fahavalon'ny" Etazonia, ho nolanjaina izy ka hanaiky ny tsiny sy ny sazy ihany amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Manaiky ny fandikana ny sazy amerikana atao amin'i Iran i ZTE ary handoa onitra maherin'ny 1.000 miliara